Azo atao ve ny mitahiry ny ovy ao anaty vata fampangatsiahana amin'ny endrika nofatorana, manondraina ary manina, mandra-pahoviana ny fe-potoana ary nahoana no tsy tokony handry ao mandritra ny fotoana maharitra izy? - Ho an'ny mpivady - 2019
Miaro ny tsiro sy ny tombony - azonao atao ve ny mitahiry ovy, mofomamy sy mofomamy ao anaty kamiao?
Ny karazana voankazo tsy simba sy voankazo, araka ny fantatra, dia tsy azo sakanana mandritra ny fotoana lava eny amin'ny rivotra, na dia ao amin'ny vata fampangatsiahana aza. Mamaivay izy, mangatsiaka ary mamoy ny tsirony.
Ankoatr'izay, ny ovy tsirairay, miankina amin'ny karazana fanodinana, dia manana ny fepetra manokana sy ny fiainany.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny fomba hitehirizana voatabia tsara isika, hahitana raha afaka mitahiry izany ao amin'ny vata fampangatsiahana ianao. Ary koa hanokafantsika tsiambaratelo kely ny fomba hampitomboana ny fiainan'ny voankazo amin'io legioma io.
Ahoana ny fomba hamonjena ireo voankazo voarara?
Azo atao ve ny manitatra ny fiainan'ny ombivavy matavy sy ny habetsahany?
Nahoana no tsy afaka maharitra ela ao amin'ny vata fampangatsiahana?
Tsy misy afa-mitahiry anaty rano ny ovy.. Ny legioma dia tokony hadio amin'ny tany ary hapetraka ao anaty vilany madio rano. Vakio bebe kokoa momba ny fitsipika momba ny fanangonana ovy hoditra voasambotra ao anaty lahatsoratra.
Ao ivelany, ny vokatra dia hohamaivanina haingana noho ny fidiran'ny tsiranoka ao amin'ny akora misy azy amin'ny oksizenina. Ny voankazo voavoly ao anaty vata fampangatsiahana dia azo alaina mandritra ny iray andro.
Raha te hampitombo ny fiainan'ny karazam-boasary tsy misy voamaina ianao androany, dia azonao atao izany. Ho an'ity:
Ny vokatra voasasa sy voatrobaka dia napetraka ao anaty kitapo plastika ary mifatotra tsara;
Avy eo dia alefa any amin'ny frizera izy.
Mitandrema anefa: Ny karazam-bary toy izany dia azo fehezina ao anaty kitapo sy fitahirizana vata mandritra ny volana maromaro.
Ny antsipirihany momba ny fomba hitehirizana voatango tsara, dia nofaritanay ato amin'ity lahatsoratra ity.
Raha mahandro sakafo matsiro kokoa noho izay azonao ihinanana amin'ny sakafo antoandro ianao, dia afaka mamonjy azy io mandrapahatongan'ny sakafo manaraka ao amin'ny latabatra. Saingy misy fitsipika maromaro manan-danja tokony hotadidinao.:
Ny ovy nohosaina dia tokony hafindra amin'ny sombin-tsigara izay mihidy mafy ny fonony.
Inona no fiainan'ny legioma voatsabo ao anaty vata fampangatsiahana? Tazony mihoatra ny roa andro ny vokatra vita amin'ny endrik'ity endrika ity.
Na dia amin'ny fahitana sy ny fofona amin'ny andro fahatelo aza, dia toa miendrika ho anao ireo ovy - tsy azo omena sakafo. Mety hampidi-doza izany, satria ny vanim-potoanan'ny fatiantoka dia manomboka, mipoitra ny poizina, izay mampidi-doza ny fahasalaman'ny olombelona. Noho izany, tsara kokoa ny manary ny ambim-bary sisa fa tsy misy poizina.
Azonao atao ihany koa ny mampitombo ny fiainan'ny vokatra vita amin'ny vokatra vita amin'ny vacuum. Raha tsy misy oksizenina, dia afaka mandry ao anaty vata fampangatsiahana na dia mandritra ny herinandro aza ny ovy, saingy tsy mitovy ny tsirony.
Samy tia karazan-tsaka ny olon-drehetra, ary ny sakafo matsiro indrindra - mafana, mafana, mofomamy vaovao. Tsara kokoa ny manosotra azy amin'ny latabatra, amin'ny ampahany kely. Mikarakara maharitra mandritra ny fotoana lava amin'ny hafanana ambony, ary na dia amin'ny solika aza, dia tsy azo atao ny vokatra.
Saingy raha mitohy ny fatra aorian'ny sakafo, dia arotsaho ao anaty fitoeran-tsakafo na koveta sakafo izy ireo, afindrano mafy ny kofehy ary apetraho ao anaty vata fampangatsiahana. Ny voankazo voarara dia azo fehezina amin'ny toe-javatra toy izany mandritra ny 24 ora. Amin'izay dia tsy hanana endrika ivelany intsony izy, hanandrana, ary hampidi-doza ho an'ny fahasalamana.
Misy, mazava ho azy, safidy iray, mametraka ny vokatra matsiro ao anaty fonosana vaksiny, ary alefaso any amin'ny frizera, avy eo dia hihalehibe ny andro iainana. Fa nahoana? Vao mainka hiharatsy ny tsirony ary tsy hisy soa azo avy amin'izany.
ZAVA-DEHIBE: Ny fandaharam-potoana dia tokony ho mihoatra ny 3-4 degre. Misy karazan'aretina kanserôma ao anaty ovy.
Amin'ny ankamaroan'ny vokatra entin'ny hafanana, mikombom-bary sy bobongolo dia manomboka mivoatra mandritra ny fotoana maharitra.
Para ranomandry., ary tsy voatery ny hitazona azy amin'ny endriny efa hatramin'ny ela, na dia ao amin'ny vata fampangatsiahana aza. Tsy vitan'ny hoe very ny toetra tsara sy ny tsirony izy io, fa lasa moka, tsy azo itokisana ary mety hampidi-doza ho an'ny fahasalamana, satria mety hiteraka korontana mahery vaika sy poizina mahery vaika.
Ary ny ovy nohosorana, rehefa ao anaty rano izy ireo mandritra ny fotoana lava ao amin'ny kamirao na rehefa mangatsiaka, dia manjary rano sy tsy misy tsirony. Noho izany dia tsara kokoa ny mitondra ity vokatra ity mandrakariva, ary amin'ny habetsahana izay ilaina mba hanomanana sakafo amin'ny fotoana iray.
Misy famintinana amin'ny antsipirihany momba ny fomba hitahirizana ny ovy sy ny fomba hitehirizana azy ireo dia hita ao amin'ny lahatsoratra iray hafa. Mandra-pahatongan'izany, dia manolo-tena izahay hahafantatra ny fomba hiarovana ny fakan'ny faka ao amin'ny trano iray, ao amin'ny lakozia, eny amin'ny balkonina, anaty boaty ary any amin'ny trano fambolena legioma.
Ankehitriny dia efa nianatra ny habetsaky ny fomba sy ny fomba ahafahanao manadio ovy, voatoto sy mofomamy ao anaty vata fampangatsiahana. Ary nahoana no tsara kokoa ny tsy fanaovana an'izany? Mihinàna sakafo vaovao ary ho salama foana!
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Miaro ny tsiro sy ny tombony - azonao atao ve ny mitahiry ovy, mofomamy sy mofomamy ao anaty kamiao?